တရုတ်စုပ်စက်နှင့်တုန်ခါမှု VV170A နှင့်ထုတ်လုပ်သော Vibrator နှင့်စက်ရုံ | အနောက်တိုင်း
အရည် Silicone ထုတ်ကုန်များ
၂၀၂၁ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအသံအသစ် ...
Clayderman clitoris စတိုင်အသစ် ...
အမှတ်တမဲ့ကွေးထားသော clitoris st ...
စုပ်စက်နှင့် vibrator ပါသော vibrator၊ ဤထက်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံဖက်သည်အဘယ်နည်း။
အားသွင်းခြင်း၊ USB အားပြန်သွင်းနိုင်သည်
လုပ်ဆောင်ချက်-7-mode နို့စို့ခြင်းနှင့် 10-mode တုန်ခါခြင်း
• ၁၀၀% ရေစိမ်ခံရန်လုံး ၀ ပုံသဏ္designန်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်အသားအရည်ကဲ့သို့နူးညံ့သောဆီလီကွန်သား
•မယုံနိုင်လောက်အောင်အော်ဂဇင်အတွက် G-spot ခေါင်း
•အသံနိမ့်ဖြင့်နို့သီးခေါင်း၊ clitoris၊ လည်ပင်း၊ ကျော၊ ခြေထောက်နှင့်ခြေအစရှိသောသင်၏ကွဲပြားခြားနားသောနှိပ်နယ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် 10-mode တုန်ခါမှုနှင့် 7-mode ပုံစံများ။
•အစစ်အမှန်လိင်အတွေ့အကြုံကဲ့သို့ ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အဆက်မပြတ်အပူချိန်။
၁.၀၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံဖြင့်လူ ၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်ဖုန်မှုန့်ကင်းသောအလုပ်ရုံများနှင့်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သောပုံသွင်းနည်းပညာများပါ ၀ င်သည်။
၂. ၁၄ နှစ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သောမိုက်ခရိုမော်တာများနှင့်ဆီလီကွန်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်တို့အတွက်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းအာမခံချက်
၃။ ရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန် ၁၂၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သောလိင်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွင်အကြီးဆုံး OEM နှင့် ODM ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သောစက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း
4. ISO9001 မှအသိအမှတ်ပြု၊ CE, ROHS & FDA လက်မှတ်များကိုကျော်ဖြတ်ပါ။
၅။ ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုများနှင့်အတူပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပွဲများကိုပါ ၀ င်ပါ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်စတုရန်းမီတာ ၃၀၀၀၀ နှင့် ၀ န်ထမ်း ၄၀၀ ပါ ၀ င်သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်၊ R&D၊ အချိန်မှန်ပေးပို့ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးအာမခံခြင်း
ဖြေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူအသစ်အများစုသည်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတုံ့ပြန်ချက်များကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်အမိန့်ချလိုကြသည်။
A: အော်ဒါအတည်ပြုခြင်းနှင့်ငွေသွင်းခြင်းလက်ခံပြီးနောက် ၁၀-၂၅ ရက်၊ တစ်ခါတစ်ရံပို့ဆောင်သည့်နေ့သည်အော်ဒါပမာဏပေါ် မူတည်၍ အတက်အကျရှိလိမ့်မည်။
Q4: ပစ္စည်းများလုံခြုံပါသလား။ သူတို့အတွက်မည်သည့်လက်မှတ်ရှိသနည်း။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မီဆီလီကွန်၊ အဆိပ်မရှိ၊ free-phthalate နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သောပစ္စည်းများကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက် ISO 9001, RoHS, REACH နှင့် CE လက်မှတ်များရှိသည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဌာနရှိသည်၊ ထုတ်ကုန်အဆင့်တိုင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ၀ င်ရောက်လာသောပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ထည့်သွင်းမှုလုပ်ငန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ နောက်ဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ အထွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ပါဝင်သည်။
A: အရည်အသွေးပြဿနာများရှိလျှင်အခမဲ့လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပြန်လာအာမခံခြင်း။ သငျသညျပြန်လာမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါကျေးဇူးပြု။
A: Paypal, T/T, Western Union, Alibaba ကိုမြင်နိုင်သည်။
Q8: သင် OEM ကိုထောက်ခံပါသလား။
ဖြေ။ ၎င်းသည်ဆီလီကွန်ပစ္စည်းအသစ်အတွက် ၂၅ ရက်နှင့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအတွက်ရက် ၄၀ ဖြစ်သည်။ MOQ သည်ကွဲပြားသောထုတ်ကုန်များပေါ် မူတည်၍ 500p -10,00pcs ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပစ္စည်း ၅၀၀ ပါ ၀ င်သောသေးငယ်သောပမာဏကိုလည်းလက်ခံသည်။
ယခင်: ဂန္ထဝင် G-spot vibrator၊ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည် inextricable orgasm VV062C
နောက်တစ်ခု: အပူပေး VV171A ပါသော Vibrator
ခေတ်မီအားပြန်သွင်းနိုင်သော clitoris stimulator ZK003C
ဂန္ထဝင် G-spot vibrator၊ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ ...
အပူပေး VV171A ပါသော Vibrator